Soosaarayaasha Manihot Esculenta (Soosaarida Caleenta Kasaafada) Shirkado, Soosaarayaal ka socda Bolise
Soosaarida Manihot Esculenta (Warbixiinta Cawska)
[Magaca Latin] Manihot esculenta
[Qayb la isticmaalay] Caleenta
5 Faahfaahinta 1,10: 1,12: 1: XNUMX
[Tijaabo Qalbi Jaban] HPLC / UV
[Muuqaal] Budada bunni huruud ah
1. Kahortaga lafo-beelka, murqaha oo isku-buuqma, murqaha, addimada oo xanuuna
2. Daaweyn wax ku ool ah oo loogu talagalay periarthritis-ka garabka, Fascia inflammation, dhuunta ilmagaleenka, Xanuunka Jilibka
3. Ka ilaali carruurta dysplasia, soo bixitaanka tartiib tartiib ah, saprodontia, rickets & Lugta Lugood.
About Manihot Esculenta Warbixiinta (Kasaafada Caleen Warbixiinta)
Manihot esculenta, oo badanaa loo yaqaancassava, manioc, yuca, macaxeira, mandioca iyo aipim, waa geed dhir badan oo u dhashay Koonfurta Ameerika oo ka soo jeeda qoyska dhibka badan, Euphorbiaceae. In kasta oo uu yahay geedo sanadle ah, kasaafada waxaa si baaxad leh loogu beeray dalag sanadle ah oo ka jira gobollada kuleylaha iyo kuleylka ah ee xididkeeda tubruuga ah ee la cuni karo, oo ah isha ugu weyn ee karbohidraatka. Kasaafada badanaa waxaa lagu cunaa qaab la kariyey, laakiin tiro aad u tiro badan ayaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro istaarijka kasaafada, oo loo yaqaan 'tapioca', oo loo isticmaalo cuntada, quudinta xoolaha, iyo ujeedooyinka warshadaha. Waxaa laga sameyn karaa bur loo isticmaalo rootiyada, keega iyo buskudka.
Waqtigaan la joogo, Manihot Esculenta Extract waxaa badanaa loo isticmaalaa si loo helo xididdadiisa wax soo saarka istaarijka iyo ethanol. Intaas waxaa sii dheer, caleemaha kasaafada waxaa loo isticmaalaa daawo dhireed iyada oo la qalajiyo lagana dhigo budada caleen, waxaana loo isticmaalaa iyada oo lala kaashanayo geedo kale si loo daweeyo cudurada qaarkood. Sidaa darteed, caleemaha kasaafadu waxay leeyihiin saameyn caafimaad oo wanaagsan. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee firfircoon ee laga soosaaray caleenta caleenta ethanol waa flavonoids, kuwaas oo ka mid ah maaddooyinka ugu firfircoon ee dhirta daawada ku jira dabeecadda, taas oo baabi'in karta xagjirnimada aan oksijiinta lahayn. , wuxuu xakameeyaa dufanka dhiigga, noqo anti-buro iyo fayras ka hortag waxayna leeyihiin howlo kale oo jir ahaaneed.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan badeecada, fadlan u soo dir emaylka [Email ilaaliyo]
Helen Kang ayaa mas'uul ka ah dhammaan jiilka hoggaanka, adeegga macaamiisha, iyo howlaha suuqgeynta.